Budata SplikTV maka gam akporo [Ihe nkiri+Series] - Luso Gamer
A na-ahụta ihe nkiri na usoro ihe nkiri adịchaghị ka ihe omume ntụrụndụ dị oke ọnụ. N'ihi na ọnụ ahịa ndenye aha nwere ike karịa narị narị dollar. N'ihi ya, na-elekwasị anya na free na mfe ohere videos ebe a anyị na-eji SplikTV Apk laghachi.
N'ezie, nke Ngwa ihe nkiri bụ ihe ntanetị kachasị mma nke na-enye ndị ọrụ gam akporo ohere ịkwanye. Ọdịnaya ntụrụndụ na-akparaghị ókè n'efu na-enweghị ndenye aha ma ọ bụ ndebanye aha. Naanị ihe ha chọrọ bụ ụdị faịlụ Apk kachasị ọhụrụ.
Cheta na-enweghị njikọ ịntanetị kwụsiri ike, ọ gaghị ekwe omume ịkwanye ihe nkiri. Ma na-atụle ntụsara ahụ nke onye na-ekiri ya, ebe a ndị ọkachamara na-akụnye sava ngwa ngwa. Yabụ na-amasị gị ịkwanye ntụrụndụ na-enweghị ngwụcha site na ikpo okwu wee budata SplikTV App.
Kedu ihe bụ SplikTV Apk
SplikTV Apk bụ ebe ntụrụndụ dị n'ịntanetị ebe ndị ọrụ gam akporo nwere ike ilele ihe nkiri na usoro na-akparaghị ókè. Ọzọkwa, ndị mmepe ahụ gbakwunyekwara ọtụtụ edemede metụtara ihe nkiri TV na IPTV. Agbanyeghị, anyị enwetabeghị ụdịrị ndị ahụ.
Ihe mere anyị ji amanye ndị na-ahụ maka ntụrụndụ ka ha wụnye ngwa ahụ. Ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere ohere ozugbo na nyiwe ewu ewu n'ịntanetị? Ihe kpatara nke ahụ bụ n'ihi ọnụ ahịa dị oke ọnụ na ụgwọ ndenye aha kwa ọnwa.
Anyị kwenyere, enwere ọtụtụ nyiwe ndị ọzọ ewu ewu a na-enweta n'ịntanetị. Ma ịgagharị nyiwe ndị a ma ama chọrọ ikikere ndebanye aha adịchaghị. Na-enweghị ikike, ọ gaghị ekwe omume ịnweta weebụsaịtị ndị pro.
Ya mere, ilekwasị anya na ọnụ ahịa dị oke ọnụ na ọdịnaya akọwapụtara obodo. N'ebe a, anyị mechara nwee ihe ịga nke ọma n'iweta SplikTV Android. Nke ahụ bụ n'efu ibudata na achọghị ndenye aha ma ọ bụ ndebanye aha maka ịnweta dashboard isi gbakwunyere vidiyo.
Aha ngwugwu com.splikdev.tv
Achọrọ gam akporo 5.1 na gbakwunyere
Naanị ihe ha chọrọ bụ ụdị faịlụ Apk kachasị ọhụrụ. Nke ahụ dakọtara na ekwentị ekwentị gam akporo niile. Site ebe a android ọrụ nwere ike mfe ibudata ọhụrụ ngwa faịlụ. Naanị budata ngwa emelitere, wee tinye ya n'ime ama.
Ka anyị na-egwu ala, anyị chọtara ọtụtụ nhọrọ dị iche iche n'ime. Ndị ahụ bụ ngalaba bara ọgaranya, nzacha ọchụchọ omenala, ihe ncheta ngosi, sava na-anabata, ihe ọkpụkpọ vidiyo arụnyere, onye njikwa nbudata na nhọrọ ntọala zuru ezu wdg.
Anyị ekwuola gbasara Sava na-anabata mana chefuo ịgbakwunye isi ihe a. Ihe nkesa ahụ ga-ebute njikọ ịntanetị ndị na-ekiri ya ozugbo. Ka e were ya na ọ bụrụ na onye na-ekiri na-enwe nsogbu ịchọta njikọ ịntanetị dị larịị.
Mgbe ahụ, sava ndị na-anabata ga-edozi ogo nkwanye na-akpaghị aka wee hụ na iyi na-aga n'ihu. Ihe nchọta omenala ga-enyere ndị ọrụ android aka ịchọta faịlụ ozugbo. Ihe ncheta ngosi Push ga-enyere aka n'ime ka ndị ọrụ na-emelite ihe gbasara ebugo na mmelite.
Ihe ọkpụkpọ vidiyo arụnyere arụnyere nwere ike inye aka hazie ụdị ikiri ugbu a. Na onye njikwa nbudata na-ahụ na a na-atụgharị iyi ahụ na ọnọdụ offline. Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya ndị a niile pro atụmatụ nke ngwa wee wụnye SplikTV Download.
Apk nweere onwe ibudata.
Ịwụnye ngwa na -enye ntụrụndụ enweghị ngwụcha.
Nke ahụ gụnyere ma ihe nkiri na usoro.
Ihe ngosi TV na akwụkwọ akụkọ nwekwara ike iru.
Ọ nweghị IPTV dị maka ịnweta.
Ihe nchọta omenala ga-enyere aka n'ịchọta faịlụ n'ụzọ dị mfe.
Ihe ncheta ncheta ga -enyere aka mee ka ndị ọrụ na -emelite.
Otu esi ebudata SplikTV Apk
Mgbe a bịara na nbudata ụdị faịlụ Apk kachasị ọhụrụ. Ndị ọrụ gam akporo nwere ike ịtụkwasị obi na webụsaịtị anyị n'ihi na ebe a na weebụsaịtị anyị naanị anyị na-enye faịlụ Apk ezigbo na mbụ. Iji hụ na nchekwa na nzuzo nke onye ọrụ.
Anyị goro otu ọkachamara nke nwere ndị ọkachamara dị iche iche. Ọ gwụla ma anyị ji n'aka na faịlụ Apk na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ dịghị mgbe anyị na-enye ndị n'ime download ngalaba. Ka ibudata ụdị SplikTV 1.3 emelitere biko pịa njikọ enyere n'okpuru.
Faịlụ ngwa anyị na-egosi ebe a bụ nke izizi na ọ nweghị ndebanye aha. N'agbanyeghị na ọ nwere ike ịchọ koodu mmalite. Ma enwere ike nweta koodu ahụ ozugbo na webụsaịtị gọọmentị. Mgbe wụnye ngwa anyị ahụghị kpọmkwem nsogbu n'ime.
A na-ebipụta ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ngwa ntụrụndụ yiri nke a na webụsaịtị anyị. Iji wụnye na ịnụ ụtọ ngwa ndị ọzọ biko soro njikọ. Kedu ndị bụ Wovie TV Apk na HDO Player Apk.
Ọ bụrụ na ịnọ naanị gị, rapaara n'otu ebe ma ọ nweghị ọrụ ọzọ ma ewezuga ihi ụra. Mgbe ahụ n'ọnọdụ dị otú ahụ, anyị na-akwado ndị ọrụ gam akporo ka ha wụnye SplikTV Apk. Nke ahụ nwere ike ịnweta site na webụsaịtị anyị site na iji otu pịa nhọrọ n'efu.
Categories Entertainment, Apps Tags Ngwa ihe nkiri, SplikTV Android, SplikTV Apk, Ngwa SplikTV, Budata SplikTV Mail igodo
Nbudata Wovie TV maka gam akporo [Ihe nkiri]